ပုံများကိုဖျောက်ထားပါ - KeepSafe Vault | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » ဓါတ်ပုံတွေကို Hide - KeepSafe Vault
ပုံများကိုဖျောက်ထားပါ - KeepSafe Vault APK
* သင့်ရဲ့အန္တာရာယ်မထားပါနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်များ, လျှို့ဝှက်ဗီဒီယိုများ or လုံခြုံတဲ့ဖိုင်များ သင့်စက်ကိုလူတို့အသုံးပြုသောအခါပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်မြင်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓာတ်ပုံများကိုယုံကြည်သူများသန်းပေါင်းများစွာနှင့် Keepsafe သို့ဆက်သွယ်ပါ အကြီးမားဆုံး ဓာတ်ပုံ Locker အက်ပလီကေးရှင်း။ *
Keepsafe သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓာတ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်များသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဗွီဒီယိုများကိုလုံခြုံရေးအလွှာများနောက်ကွယ်တွင်ဝှက်ရန်နှင့်သော့ခတ်နိုင်ရန်အတွက်ဓာတ်ပုံ Locker အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Keepsafe သည်သင်၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသင်၏လုံခြုံသည့်လျှို့ဝှက် Cloud တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိနေရာလွတ်များကိုလည်းအသုံးချနိုင်သည်။
Keepsafe ဓာတ်ပုံ Locker ၏အင်္ဂါရပ်များ:
• သော့ခတ်နောက်ကွယ်မှအရာအားလုံး - သင်၏ဓါတ်ပုံများကို PIN နံပါတ်၊ ပုံစံသို့မဟုတ်သင်၏လက်ဗွေဖြင့်လုံခြုံစွာထားရှိသည်။
• ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစည်းညှိပါ - သင်၏ encrypt လုပ်ထားသော Private Cloud သည်သင်၏ဓာတ်ပုံများ၊ အယ်လ်ဘမ်များနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်လုံလုံခြုံခြုံစည်းညှိပေးသည်။
• လွယ်ကူသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုအရန်ကူးပါ - ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခိုးခံရခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းရှိပါကမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
• Face-down အလိုအလျောက်သော့ခတ် - တင်းကျပ်စွာအခြေအနေမှာ? သင်၏စက်အောက်ဖက်သို့ရောက်သောအခါ Keepsafe ကိုကိုယ်တိုင်ပိတ်ထားပါ။
• Safe Send ဓာတ်ပုံမျှဝေပါ - ပုဂ္ဂလိကဓာတ်ပုံများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်မျှဝေပါ။ လက်ခံသူသည်သင်၏ဓါတ်ပုံကိုမည်မျှကြာကြာမြင်သည်ကိုထိန်းချုပ်ပါ - ဓါတ်ပုံများသည်သူတို့လက်ခံရရှိပြီးနောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားမည်။
• Keepsafe သည်လည်းသင်၏မကြာသေးမီကအသုံးပြုခဲ့သောအက်ပလီကေးရှင်းစာရင်းတွင်မပေါ်ပါ။
အခမဲ့ Cloud Private သိုလှောင်မှုရရှိရန်နှင့်အခမဲ့စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုရရှိရန် Keepsafe အခြေခံကို Install လုပ်ပါ Keepsafe ပရီမီယံ!
Keepsafe ပရီမီယံသည်လုံခြုံမှုနှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုအပိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်များနှင့်လျှို့ဝှက်ဗွီဒီယိုများကိုမမြင်ရသောမျက်စိများမှကာကွယ်ပေးရုံသာမကသင်၏ဓါတ်ပုံများကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်နေရာလွတ်များလွတ်မြောက်ရန်အတွက်နောက်ထပ်သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုကိုလည်းပေးသည်။
•တစ် ဦး ချင်းအယ်လ်ဘမ်အတွက်စကားဝှက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါ
•တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ရဲ့ PIN နံပါတ်အမှန်ကိုတောင်းလာတဲ့အခါသင်သုံးနိုင်တဲ့ 2nd, အတု PIN နံပါတ်ကိုဖန်တီးပါ။ ဒါကလှည့်စား Keepsafe photo vault ကိုဖွင့်ပေးတယ်။
•ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများက Keepsafe ကိုဖွင့်သောအခါ Keepsafe ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
•သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုဖော်ပြရန်သင်၏လျှို့ဝှက်ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရန်သင်၏ Keepsafe photo vault ကိုဖွင့်ရန်လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းကိုသင်သာသိလိမ့်မည်။
• Keepsafe သည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများမှရိုက်ထည့်သည့်ဓာတ်ပုံ၊ timestamp နှင့် PIN ကိုဖမ်းယူသည်။
• Keepsafe သည် 30 စက္ကန့်များကိုချက်ချင်းပိတ်မည့်အစားပိတ်ပြီးနောက်၊ သော့ခတ်ထားသည်။
သင်၏ Keepsafe ၏အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။
သင်၏ဖုန်း၏ဓာတ်ပုံပြခန်းကိုကြည့်။ သင်၏ Keepsafe ဓာတ်ပုံသိုလှောင်ရုံထဲသို့တင်ရန်ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုအသာပုတ်ပါ။ တင်သွင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ဖုန်း၏အများပြည်သူဓာတ်ပုံပြခန်းမှသင်၏ဓါတ်ပုံများကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပြီးသင်၏ Keepsafe ဓာတ်ပုံသိုလှောင်ရုံတွင်ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Q: Keepsafe မှကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ယူလို့ရပါသလား။
A: ဟုတ်ပါသည်။ သင်သည် Keepsafe မှဓာတ်ပုံများကိုလွယ်ကူစွာတင်ပို့နိုင်သည်။
မေး။ ။ ကျွန်တော်သူတို့ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံတွေဘယ်မှာလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါတွေကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးရင်၊ မင်းရဲ့ဓါတ်ပုံတွေဟာ“ public” ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုမှာရှိနေလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ ဒါကမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ပေါ်မှာသော့ခတ်တာနဲ့တူလား။
A: Keepsafe ကအရာရာတိုင်းကို encrypt လုပ်ပြီးသင်သာကြည့်နိုင်အောင်ပြန်လည်ရယူနိုင်အောင်သင်၏ဒေတာကိုအရံသိမ်းပါ။
Q: ကျွန်ုပ်၏ပင်နံပါတ် (သို့) လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားတယ်
A: သင်၏ PIN နံပါတ်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်အတွက် Keepsafe ကိုဖွင့ ်၍ Keepsafe လိုဂိုကိုကြာရှည်နှိပ်ထားပါ။
Q: Keepsafe သည် .wmv ဗွီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထောက်ခံပါသလား။
A: မရှိပါ၊ Keepsafe .wmv ဗီဒီယိုများကိုမထောက်ပံ့ပါ။
A: Keepsafe ပရီမီယံသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာများမှပံ့ပိုးမှုဖြင့် Keepsafe Basic ကိုအခမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ပိုမိုသောမေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအတွက် support@getkeepsafe.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ
* startup မှာအမျိုးမျိုးသော crash များကိုပြုပြင်ခဲ့သည်
Keepsafe ကိုဖုန်းအသစ်တစ်ခုတွင်အသုံးပြုနေပါသလား။ OLD ဖုန်းမှ SAME Keepsafe မှတ်ပုံတင်ခြင်းအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးပါ။
* Keepsafe သည် Keepsafe နှင့် Keepsafe မျှဝေခြင်းအတွက်ဆက်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာယခုအချိန်တွင်သုံးစွဲသူများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် beta ကိုစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရုပ်ပုံများဖျောက်ထားပါ Safe Vault သိမ်းပါ
18.23 ကို MB
ဇန်နဝါရီ 26, 2017
Locker တွေ Tools များ
ဇွန်လ 30, 2015 မှာ 4: 13 ညနေ
ဓာတ်ပုံများကို Keepsafe ဗားရှင်းအဟောင်းတွင်ဝှက်ထားခြင်းနှင့်အချို့အခြေအနေများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပျက်စီးခြင်းသည်အခြားဖုန်းတွင်ရှိသောပုံများကို keepsafe ဗားရှင်းအသစ်တွင်ရရှိပါက
ဇွန်လ 30, 2015 မှာ 4: 12 ညနေ
plz ငါ့ကိုကူညီငါငါ့ pics အားလုံး၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အရေးအပါဆုံးဒေတာ restore လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
မတ်လ 31, 2015 မှာ 7: 23 ညနေ
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းအသစ်ကို Keepafeafe ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်သောအခါဆာသည်ကျွန်ုပ်၏ privious ဖုန်းကိုယခုပျက်ကျခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 18, 2014 မှာ 10: 30 ညနေ
keepsafe တွင်ဝှက်ထားသောဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မပြန်နိုင်ပါ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
အောက်တိုဘာလ 17, 2014 မှာ 1: 30 နံနက်
သူတို့က keepsafe အပေါ် theyre ပေမယ့်ငါအီးမေးလ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာမှတဆင့်ဖြစ်စေသူတို့ကိုပြန်ချင်တယ်
အောက်တိုဘာလ 14, 2014 မှာ 7: 15 ညနေ
ငါဘာလုပ်သင့်လဲ …။?? Plz အကူအညီ…?
အောက်တိုဘာလ 11, 2014 မှာ 9: 49 နံနက်
ငါဗီဒီယိုကို safe safe ၌သိမ်းထားလိုက်သည်။ ထိုနေရာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မှမကစားပါ။
အောက်တိုဘာလ 10, 2014 မှာ 3: 43 ညနေ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီလိုပါလိမ့်မည်။ လုံခြုံစိတ်ချစွာထားပါ။ ဓာတ်ပုံများကိုမမြင်ရသည့်အခါပုံများကို နှိပ်၍ ဖွင့ ်၍ မရပါ။ pls me help
အောက်တိုဘာလ 1, 2014 မှာ 11: 27 နံနက်
လုကာ Butterfield says:
အောက်တိုဘာလ 1, 2014 မှာ 8: 32 နံနက်
ငါမကြာသေးမီကဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုရလိုက်ပြီး vaulty stock app ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ခဲ့သည်ကိုမသိပါသို့မဟုတ်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုပင်မသိပါ၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပြခန်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ငါ app ကိုသွား, ပြခန်းကိုကြည့်ပါကဖုံးကွယ်ဓါတ်ပုံများကိုမပြပါ, ငါ့ဖုန်းပြခန်းကိုပြန်အပေါင်းတို့နှင့်တကွရှိသေး၏။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
jass brar says:
စက်တင်ဘာလ 25, 2014 မှာ 2: 49 ညနေ
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို Samsung galaxy2ကိုပြန်ထားပေးပြီးအချက်အလက်အားလုံးကို SD ကဒ်တွင်ရွှေ့သည်
ထိုအခါငါရုတ်တရက် sd ကားထဲတွင်ပြသော Keep safe folder ကိုငါပယ်ဖျက်လိုက်သည်နှင့် keepsafe သစ်ကို install လုပ်သည့်အခါငါ၏အဓါတ်ပုံတွေကို Dummy ပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မဖတ်နိုင်သော
စက်တင်ဘာလ 24, 2014 မှာ 11: 22 ညနေ
ငါ့ဖုန်းခိုးသွားတယ်။ ဖုန်းအသစ်တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့လုံခြုံစိတ်ချရမယ့်ပုံတွေမရှိတော့ဘူး။ သူတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။
စက်တင်ဘာလ 13, 2014 မှာ 2: 01 နံနက်